Rest of Myanmar | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Rest of Myanmar ရှိ မှ စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ
Senior Internal Auditor (VisionFund)
Location: Mandalay and Yangon
Accountant (Naypyitaw Region)
In close cooperation with Livelihood Manager and Officer to ensure the Livelihood Program activ ...
Finance Officer (MHAA)
Location Chaung U Township
All functions of Chief Accountant
This job is in Lewe Township(Naypyitaw), Can you work in Lewe?
Can you work in Magway?
Senior Loan Officer ( Chauk )
- ချေးငွေလုပ်ငန်းတွင် အနည်းဆုံး (၂) နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ချောက်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Assistant Branch Manager (Chauk/ Meikhtila)
- Must have minimum (3) years working experience in Micro-finance. - Must have (1) year in Management experience. - Able to work in Chauk or Meikhtila.
Senior Customer Service Officer (Magway)
- ချေးငွေလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - မကေွး တွင်နေထိုင်သူများဖြစ်ရမည်။
Branch Manager (Mon State)
- Must have minimum (4) years working experience in Micro-finance. - Must have (1) year in Management experience. - Able to work in Mon State.
Senior Loan Officer (Meikhtila )
- ချေးငွေလုပ်ငန်းတွင် အနည်းဆုံး (၂) နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ - မိထ္ထီလာတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။